मधेशीदलहरुसँग मिलाएर सरकार बनाउँदा भारतलाई फाईदा के ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
काठमाडौं । भारत माओवादी बाहेकको ओली सरकारको चहानामा रहेको विश्लेषण हरुको भनाई रहेको छ । मधेशीदलहरुसँग मिलाएर सरकार पहिलो फाईदा एकातिर काँग्रेस र माओवादीलाई प्रतिपक्षमा राखिसकेपछि र गठबन्धन तुहाईसकेपछि ओली भारतप्रति यति आश्रित हुन्छन् कि भारतको चित्त मात्रै दुखाउन खोजेभने मधेशी दलहरुको प्रयोगगरी दुईवर्षमा नै ओलीको सरकार ढाल्न सकिन्छ भन्ने भारतको चाहाना रहेको छ ।
त्यसैले यसरी माओवादीलाई सत्ता बाहिर राखेर काम गर्दा ओलीले खुल्ला हृदयले चीनसँग सहकार्यको हात फैलाउन पाउने छैनन् । दोस्रो फाईदा गठबन्धन तुहाईसकेपछि भारतले प्रचण्डलाई सबक सिकाउने राम्रै वातावरण बन्न सक्छ । यस अघि किस्ताबन्दीमा प्रचण्डले भारतलाई दिएको धोकाको हिसाव किताव भारतले ओली मार्फत् नै गराउने छ ।
यसरी बाम गठबन्धन फुटाएर सरकार बनाउन सकेको खण्डमा एकातिर एमालेभित्रै असन्तुष्टिको चाङ देखिन्छ भने अर्को तिर बलियो प्रतिपक्षी र कमजोर सत्तापक्ष हुँदा विकासको काम एकातिर गर्न नसकिने र अर्को तिर चीनसँगको सम्बन्धलाई पनि थप अघि बढाउन नसक्ने अवस्था सरकारसँग रहन्छ । यस्तो अवस्थामा भारत आफ्ना स्वार्थहरु पूरा गर्न पनि सफल हुनसक्छ ।
काँग्रेस र माओवादी प्रतिपक्षमा बसे कसरी बन्छ सरकार ?
प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभाको कुल १ सय ६५ सिटमा वाम गठबन्धनले ११८ सिट ल्याएको छ । जसमा वाम गठबन्धनभित्र एमाले एक्लैले ८०, माओवादी केन्द्रले ३६, राष्ट्रिय जनमोर्चाले १ र राप्रपा १ ले एक सिट ल्याएको छ । वाम गठबन्धनकै सहयोगमा झापा ३ बाट राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेनले जितेका हुन् । राष्ट्रिय जनता पार्टीले ११ र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले १० सिट जितेका छन् ।
समानुपातिक तर्फको मत परिणाम सार्वजनिक भएपनि सिट संख्या यकीन भईसकेको छैन । यद्यपि समानुपातिकमा एमालेको कम्तिमा ४० सिट आउने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा एमाले एक्लैको कूल १ सय २० सिट हुन्छ । सरकार गठनको लागि आवश्यक पर्ने बाँकी १८ सिटमा राजपाको प्रत्यक्ष तर्फको ११ सिट र समानुपातिक तर्फको सम्भावित ७ सिट गर्दा सहजै बहुमत ओलीको पक्षमा पुग्ने आकलन भारतको छ ।
यस्तो अवस्थामा संघीय समाजवादी फोरमलाई पनि भारतले मिलाउन सक्यो भने ओली झनै ओलीको पक्षमा नै धेरै सांसद् हुने देखिएको छ । यस बाहेक राष्ट्रिय जनमोर्चा, एमालेकै सहयोगमा जितेका राजेन्द्र लिंदेन जस्ता सांसद्हरुलाई पनि मिलाएर ओलीको सरकार बन्न सक्छ ।